Global Voices teny Malagasy · Koloina RAMASINANDRO – Momba ny mpandray anjara
Lahatsoratra farany an'i Koloina RAMASINANDRO
18 Septambra 2011
13 Marsa 2010
Nepal : Nampanginin'ny mpandala ny Fitondrana mpanjaka ny renivohitra
Mpanoratra Bhumika Ghimire · Nepal
Mitaky ny famerenana ny lalam-panorenana monarsika (mpanjaka) ireo vondron’olona mpandala an’izany fitondrana izany ary ny fananganana firenena Hindu ao nepaly dia hampihidy (hampianjera) tanteraka ny renivohitra ao aminy.
23 Febroary 2010
Shina : horonantsary fohy maneso ny sivana amin'ny aterineto
Mpanoratra Robert Woo · Shina
Nahatontosa horonantsary fohy vaovao iray enti-mitsikera ny sivana amin'ny aterineto any Shina ilay mpamokatra horonantsarimihetsika tsy matihanina, Hu Ge . Tahaka ireny horonan-tsary fanadihadiana izay maharitra 7 minitra mahery eo, mitondra ny lohateny hoe ‘Tontolon’ny biby: Ny biby miaina an-trano‘ ka nahasarika olona an-hetsiny sahady izany tao anatin’ny andro vitsy...
13 Aogositra 2009
Mpanoratra Juliana Rincón Parra · Media sy Fanoratan-gazety
Ny fifaninanana Put It On Picture Show dia mety hahazoana vatsim-pianaranana hianatra any amin’ny New York Film Academy ary ihany koa loka mitentina 5000 dollars amerikanina, ho an’ny court métrage tsara indrindra, na ho an’ny long métrage tsara indrindra, ary koa ho an’ny mpaneho an-tsehatra [interpretation ] mendrika indrindra [Andoavambola...
06 Aogositra 2009
Mpanoratra Juke Carolina · Indonezia
02 Aogositra 2009
Mahazoa T-Shirt Global Voices vaovao
Mpanoratra Solana Larsen ·
Raha tia ny Global Voices ianao, dia tsy misy fomba hafa sy tsotra ho fanehoanao izany afa tsy ny mitafy ny akanjo (T-Shirt) Global Voices vaovao mahafatifaty iray. Hivory hanotrona an’i Barack Obama ve ianao, na ny mpanjakavavin'i Jordania ? hitafio ilay T-shirt! Hiseho amin’ny fahitalavitra? Aza hadinoina ilay akanjonao...
14 Jolay 2009
Mankalaza ny andron’ny tanora ny firenena Afrika Atsimo ary mahatsiaro ny fahiny
Mpanoratra Ismail Dhorat · Afrika Atsimo
Ny 16 Jona, izay ankalazana ny andron’ny tanora eto Afrika Atsimo dia andro ahatsirovanay ny fahiny. Tamin’ny 16 Jona 1976 no nitranga ny hetsika tao Soweto nohon'ny faneren’ny lalana fa amin’ny fiteny Afrikaans amin’izay no itondrana ny rafi-pampianarana rehetra.
30 Mey 2009
20 Avrily 2009
Jordana: Fampisehoana andrana ny fitaovana ara-Teknolojia Arabo
Mpanoratra Mohammad Azraq · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
nanatrika ny fiantombohan'ny Andrana Hafainganana Arabo (Arab Crunch Demo) ny Jordanianina Mohammad Azaraq, ny blongana iray izay mikendry ny fampisongadinana ny Arab technology start-ups, ary mizara ihany koa izy ny zavatra hitany ao anatin'ity lahatsoratra ity.